Muwaadin sheegay in iska difaacidda Kiinya ay u baahan tahay midow siyaasadeed – Kalfadhi
Cabdullaahi Cusmaan Faarax: Soomaaliya waxey wajaheysa loolankii ugu adkaa ee siyaasadda arrimaha dibadda. Marka laga tago isqancinteena, waxaa xaqiiqdii muuqda hirar qaadi kara Soomaaliya, oo aan dalkeenu taag iyo tabar midna u heynin.
Markii aad aqriso, oo aad baarto ujeedooyinka, talaabooyinka ay qaadeen, kuwa ay hadda doonayan, mid walba sida ay wax ula muuqdaan, waxa ay naga aaminsan yihiin iyo hagar daamada wadamada Kiinya, Itoobia, Imaaraadka, Sacuudiga, Yugaandha, Mareykanka, Noorweey, Ingiriiska, Qadar, Turkiga, iyo Faransiiska waxaad ogaaneysa in Soomaaliya ay halis ku sugan tahay, oo waliba aaney muuqan si fudud oo ay isku badbaadin karto.
Waxaa dowladda hadda jirta la gudboon iney bilaawdo dhab ka hadal oo, dalku inta uusan gacanta Soomaalida ka bixin, ummadda loo sheego meesha humaagga ah ee la taagan yahay, culeesyada jira iyo qadiyadaha masiiriga ah ee u baahan in go’aan mideysan lagu wajaho.
Culeesyada caalamiga ah ee taagan ma ahan wax ay gooni u curisay dowlada hadda jirta, oo waa arrin mudo taagneyd balse hadba heer joogtay, laakiin masuuliyad ayaa ka saaran maareynteeda, madaama xiligaan ay iyadu xafiiskii wax laga maamulaayay joogto.
Dhinacyada siyaasada oo dhan waad u jeeddaan halista soo socota, sidaadarteed, sax ma ahan inaad banaanka ka istaagtaan, iyadoo lagu xumeynaayo shaqsiyaadka maanta xilalka haya.
Si dalka loo badbaadiyo, waxaan qabaa in loo baahan yahay “Shirka Turxaan-bixinta Siyaasadda Arrimaha Dibbada ee Soomaaliya”, kaas oo kulminaya dhamaan dhinacyada siyaasadda, aqoonyahanka, qurba-joogta iyo dadka wax baara oo dhan, kadibna waa in si dhab ah loo doodaa, oo waxa jira, sida looga gudbi karo iyo qorshaha mustaqbalka la jeexaa. Qarankan ruwaayad iyo waxaan ahaan jirnay kuma sii socon karo, ee aan toosno.
Cabdullaahhi Cusmaan Faarax
Madaxweyne ku xigeenka Jubbaland"Baardheere waxaan u joogaa in aan Xaliyo Xiisadda ka jirta"